[APK] LG G3 ၏ LG ကျန်းမာရေးသည်မည်သည့် LG အတွက်မဆို Androidsis
[APK] LG G3 ၏သီးသန့် LG Health application ကိုသင်၏ LG တွင်တပ်ဆင်ပါ
Francisco Ruiz | | Android application များ, LG
အခမဲ့ Android သုံးစွဲသူများကိုမနှစ်သက်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ iOS လိုမျိုးလုံးဝပိတ်ထားတဲ့ operating systems၎င်း၏ ကွဲပြားခြားနားသော applications များ၏ဆိပ်ကမ်းများစမ်းသပ်နိုင်ပါလိမ့် ၏ကိုယ်ပိုင် သည်အခြား terminal ကိုမော်ဒယ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ် သူတို့ကို Android ထက်အခြားမော်ဒယ်များတွင်သုံးနိုင်သည်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ပေးတဲ့ဆိပ်ကမ်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် XDAဒါကငါတို့ကိုခွင့်ပြုမှာပါ LG G3 ပေါ်ရှိသီးသန့် LG Health app ကိုစမ်းပါ LG G2 ကဲ့သို့သောအခြား LG model များပေါ်တွင်။
2 LG G3 မှ LG Health ကိုမည်သည့် LG မဆိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းရမည့်တစ်ခုတည်းသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်လိုအပ်ချက်မှာ - LG အမှတ်တံဆိပ် Android terminalကဲ့သို့သော LG က G2ထို့အပြင်တစ် ဦး ရှိရမည် စတော့အိတ်ကိုအခြေခံပြီးစတော့ရှယ်ယာ firmware သို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ထားသောရမ် တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်နိုင်ငံစုံ၏။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်ပြောပြရန်ရှိသည် ကျွန်ုပ်၏ LG G2 တွင်ထည့်သွင်း။ မရပါ အခုတော့သင်အားလုံးသိကြပြီဖြစ်လို့၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပေးတဲ့အလုပ်လုပ်မှုနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများအားလုံးကိုငါသွားကတည်းကအချိန်ကောင်း Cyanogenmod's Cooked Roms နှင့်၎င်းတို့၏ Android 4.4.4.
LG G3 ၏သီးသန့် application အသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်မူအရ၊ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မဆို terminal ကို၊ ကျွန်ုပ်တို့ root users ဖြစ်ရန်လည်းမလိုအပ်ပါ။ ပြုပြင်ထားသော recovery သို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့အရာများကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ.
LG G3 မှ LG Health ကိုမည်သည့် LG မဆိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ဒီစိတ်လှုပ်ရှား install လုပ်ဖို့ ကျန်းမာရေး app ၏စတိုင်၌တည်၏ Samsung Galaxy S5 S-Health o Endomondo ဒါပေမဲ့ LG ကဆိပ်ကမ်းများအတွက် optimizedရုံ သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်ဤ compressed ဖိုင်ကို zip ဖြင့် download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်, အကြောင်းအရာများကို decompress နှင့် decompression ကနေရရှိလာတဲ့ apk ရဲ့နှစ်ခုကိုလက်ဖြင့်ထည့်ပါ။
သူတို့ကိုငါကိုယ်ပိုင် LG G2 နဲ့စမ်းကြည့်ရတာမပျော်ဘူး၊ ဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုမေးလိမ့်မယ်။ စစ်ဆင်ရေးနှင့်အသုံးဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သင်၏အထင်အမြင် အသစ်နှင့်အသစ်စက်စက်၏ဤကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာ၏ LG က G3.
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် - LG G3 မှ LG ကျန်းမာရေး, ကြည့်မှန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » [APK] LG G3 ၏သီးသန့် LG Health application ကိုသင်၏ LG တွင်တပ်ဆင်ပါ
သူကကျွန်တော့်ရဲ့ LG Optimus G 4.4.2 stock modified (sling) ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ကံမကောင်းတာကတော့ application ကရပ်လိုက်ပြီ။
အဲဒါကိုမကြိုးစားဘဲဘယ်လိုတင်မလဲ။ မင်းမှာဥတွေဘာတွေရှိလဲ။ သင်၏ terminal ကိုအန္တရာယ်ပြုရန်မိုက်မဲသောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။
LG က G3
SoulCraft 2: Angels League၊ ပြိုင်ပွဲအတွက်ဆက်ဆက်